Kudzokorora Kana Kuti Kwete Kudzokorora? - Expert Of Semalt, Natalia Khachaturyan Knows The Right Answer!
Zvinyorwa zvinyorwa zvinokonzera kuvhiringidzika pakati peEOO nyanzvi kwenguva refu. Zvinonzwa se SEO bugbear inofanira kubviswa zvimwe zvinogona kuita kuti nzvimbo yako ibvise kubva pakusarudza. Kunyange zvazvo zvinyorwa zvinyorwa zvinouya nechirango, kune imwe nzira iyo Google inoshandisa kushandiswa kwegorongwa hwekushandura kuve nechokwadi kuti zvinyorwa zvinyorwa hazvibatsiri mamwe mapeji panzvimbo yako - cheap windows vps free trial.
Muzvinyorwa Strategist we Semalt , Natalia Khachaturyan, anotaura kuti Google haisi yepamusoro zvinyorwa zvakapiwa pane rimwe peji rine zvinyorwa zvakafanana zvinonyanya kuzivikanwa panzvimbo ino. Kana iwe webhusaiti yako ine mapeji akawanda ane zvimwechetezvo, Google ichava nenguva yakaoma kuedza kusarudza yakarurama. Icharatidza chete shanduro imwe yezviri mukati mutsva yekutsvaga, uye dzimwe shanduro dzakavanzwa. Vakawanda veSeO nyanzvi vanoona izvi sechirango. Zvinhu zvitatu zvinoitika mumamiriro ezvinhu akadaro:
Google haina kutarisa peji;
Chiremera chepeji iyoyo hachina maturo;
Nzvimbo iyi ichacherechedzwa sechinhu chakavimbika chezvakanaka uye zvakasiyana-siyana;
Izvi zvinopa webmasters chikonzero chekunzwa sechirango, asi zvinokosha kuziva kuti iyi haisi iyo injini dzinotsvaga dzinofanira kutarisana nayo. Kune nzira dzakawanda dzinoshandiswa muzvinyorwa zvinyorwa, asi kwete dzose dziri muzvinyorwa zvakanaka zvevashandisi vewebhu uye vanotsvaga.
Pakave nemitambo yakawanda inoshandiswa nemawebsite zvakananga kudzokorora zviripo netariro kuti izvi zvinogona kutora tsvaga yekutsvaga. Hazvirevi kuwedzera chero kukosha kwepaiti, uye kazhinji, havakwanisi kukosha. Iwe unofunga kufunga nezvehuwandu hwehupenyu hunouya neurongwa hwokuziva kuti injini yekutsvaga yakakanganisika. Kune marudzi mazhinji ezvinyorwa zvinyorwa zvinosanganisira:
Sewe muridzi wepaiti, unogona kuwana zvinyorwa zvinokosha pane imwe webhusaiti..Mushure mokuverenga zvinyorwa, unonzwa kuti unoda kugovera pane yako yepaiti. Zvisinei, iyi haisi pfungwa yakanaka, sezvo iyi isiri yako yepakutanga yakagadzirwa uye inenge isina kukosha. Pakupedzisira, tsika yakadaro inogona kutungamirira kune dhesi yakazara mumatunhu echikwata chako.
Nzira yakanakisisa yokugadzirisa dambudziko iri iri kushandisa musimboti-ruzivo rwetabhenekoni. Wedzera kuti kuratidze kuti zvinyorwa zvepakutanga zviri pane imwe nzvimbo yewebhu. Aya injini achazoziva kuti zvinyorwa zvakadhindwa uye zviri panzvimbo yako nechinangwa.
Unofanirwa kuziva kuti munyaya iyi uremu hwose hwekubatana huchaenda kune zvinyorwa. Nenzira iyi, kana ukashandisa zvibatanidza zvakawanda, uchachengetedza zvishoma zvishoma zvehutano. Kana vanhu vachida zvakakanganiswa, nhamba dzinowanoshanyira nzvimbo yacho inogona kupfuura kuderera kwepamusoro peji.
Duplicate product product
Tora mamiriro ezvinhu apo iwe une kambani inowana michina kubva kuvakadziri vakasiyana. Iwe uchada kuwana ruzivo semashoko, tsanangudzo, nemifananidzo kuti uzviise panzvimbo yako. Iwe uchapa ruzivo rwakananga sezvakapiwa nemuiti.
Kugadzirisa sei: iwe unofanira kuisa webhusaiti yako pachako. Iwe uchada kubhadharira zvakare tsanangudzo uye kuisa mapikicha akasiyana-siyana zvechigadzirwa chako, chaunogona kuwana kubva kune dzimwe nzvimbo semuongorori wemiti.
Kukanganisika: urongwa hunogona kunge hunopedza nguva sezvaunofanira kuunganidza ruzivo runobatsira kurondedzera chigadzirwa.
Multi-page product list
Izvi zvinosanganisira chizvarwa che URLs kana kuti site yako ine mapeji akawanda anotsanangura zvinhu zvakafanana.
Nzira yekugadzirisa nyaya yacho: somuenzaniso, kana uri kutarisana nezvinhu zvishanu uye iwe unopa URL itsva nguva dzose paunoronga chinhu zvichida nehukuru uye mutengo panzvimbo yehuwandu hwemafabheti, uchava nemapeji mashoma ane zvakakodzerwa pane dzimwe URL.
Zvinyorwa zvinyorwa zvinogona kuva zvinonetsa. Kana iwe uchiziva nezvenyaya yacho kare kare, ichakubatsira iwe kugadzirisa iyo isati yasvika pane zvaunofunga. Iwe uchakwanisa kuuya nezvirongwa zvekuti unoita sei kuti uremu hupfuure kuburikidza nekudzoka hauna hunokosha hwehuwandu hwako. Mhinduro dzemibvunzo idzi dzinogona kuva nguva, asi dzinokosha nguva iyo inobatsira pakuita ROI yakakwirira nekushanya kose kune webhusaiti yako.